Amazon Kindle Oasis - Graphite (32GB) ~ ICT.com.mm
HomeAmazon Kindle Oasis - Graphite (32GB)
Amazon Kindle Oasis - Graphite (32GB)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Our best 7″, 300 ppi flush-front Paperwhite display. Adjustable warm light to shift screen shade from white to amber. Waterproof (IPX8) so you can read in the bath or... [Learn more]
Brand: AmazonSKU: 116879N/ASee more: Amazon, Products, Recent Updates, TabletsFilter by: E-Book Readers,
E-Book Readers တွေကို သဘောကျနှစ်သက်စေမယ့် Amazon Kindle Oasis Tablet လေးပါ။ ဒီ Tablet လး ကိုကိုင်ဆောင်၍ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာစာပေတွေကို ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာ တကယ့်စာအုပ်ကိုကိုင်၍ ဖတ်နေရသ လို မျိုး ခံစားမှုကိုပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက (7.0) လက်မရှိပြီး 300 ppi ရှိတဲ့ Flush-front Paperwhite display အမျိုးအစားကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ မျက်နှာပြင်မှာ မိမိနဲ့အဆင် ပြေသင့်တော်မယ့် Lighting Condition ကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒီဇိုင်းပိုင်းကို လှပသေသပ်စွာ ဖန်တီးပေးထားသလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ ကိုင်တွယ် ဖတ်ရှုနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားကာ တကယ့်စာရွက်အစစ်တွေကို ဖတ်ရှုနေရသလို မျိုးခံစားမှုတွေ ရရှိအောင် နောက်ဆုံးပေါ် e-ink technology ကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာကနေ အခြားတစ်မျက်နှာကို လှန်လှောဖတ်ရှုရာမှာ ပိုမိုမြန်ဆန်အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ စာအုပ် ပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာအပြင် သတင်းစာများနဲ့ Audiobooks တွေကိုပါထောက်ပံ့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Bluetooth လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိတာကြောင့် Earphones တွေနဲ့ဖြစ်စေ၊ Speakers တွေနဲ့ဖြစ်စေ Audiobooks တွေကိုခံစားနားဆင်နိုင်မှာပါ။ စာလုံး Font အရွယ်အစားကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိဖတ်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပြီး IPX8 ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေစိုခံတဲ့ Kindle Tablet လေးဖြစ်ပါတယ်။